mardi, 17 janvier 2017 10:16
Fampianarana : Hanivana ireo mpiasa “matotoa” ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena
Hanadio ny ao aminy ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena ka hanala ireo mpiasa “matotoa” tsy miasa nefa mandray karama.
mardi, 17 janvier 2017 10:12
Allée des Baobab : Mpivady mpivaro-mandeha voaroba entana sy vola
Avy nivarotra tao amin’ny Croisement Belo izy mivady ireo omaly, ka teny an-dalana hody no nosakanan’ny efa-dahy mitondra basy teo amin’ny lalan-dratsy teo Bekonazy amin’ny « Allée des Baobab » ny fiara nentin’izy ireo. Lasan’ireo mpanakan-dalana ny entana sy ny vola maty avy any an-tsena. Niantso mpitandro ny filaminana ireo niharam-boina, nilaza ho tsy manana solika anefa ireo nilana vonjy ka dila ihany ireo mpangalatra.
lundi, 16 janvier 2017 19:59
Vangaindrano: Raikitra ny sakoroka
Mirefotra ny baomba mandatsa-dranomaso manoloana ny tobin'ny Zandary aty Vaingaindrano. Nanomboka ny maraina teo dia tonga marobe hitaky fitsaram-bahoaka ireo Fokonolona avy any Lopary. Raha tsiahivina dia nisy tovovavy 19 taona, mpianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina eto Vangaindrano hita faty tamin'ny alarobia 11 janoary teo. Vokatry ny famotorana, dia telo lahy no voarohirohy tao amin'ny Borogadin'ny Zandary. Notakian'ny fokonolona ireo nahavanon-doza fa tsy nanome ny Zandary ka dia izao sakoroka izao. Nofenoan'olona afo manerana ny arabe hanakanana ny làlana. Amin'izao moa dia anatin'ny delestazy tanteraka ny tanàna ka tsy misy finday mandeha firy fa lany fahana. Matahotra ny ainy koa ireo Zandary.
lundi, 16 janvier 2017 19:40
Mahajanga : Nivondrona anaty fikambanana ireo manana olana amin’ny ady tany
Nanangana fikambanana “Tsy ialako ny taniko” izy ireo ahafahana miaro ny tombotsoany sy ny fananany. Hanatanteraka fivoriana eny Betamanga izy ireo ny alarobia 18 janoary izao, ahafahana mitady vahaolana maharitra.
Lehiben'ny Faritra Boeny, Saïd Ahamad Jaffar
lundi, 16 janvier 2017 16:18
Amborovy – Mahajanga : Noraran’ny Faritra Boeny ny maka fasika eny
Nanomboka ny alakamisy 12 janoary 2017 dia voarara ny fakana fasika eny Amborovy. Mihotsaka ny sisin-dranomasina manakana ny ranomasina tsy hiditra an-tanety ka ahiana hitera-doza ho an’ny mponina mipetraka manodidina eny ny fidiran’ny rano. Faly sahirana ihany ny mponina raha naheno ity didy nivoka ity satria dia afaka tamin’ny fahasimban-dalana izy ireo kanefa lavitra indray ny toerana, mety ho eny Antsanitia, ahafahana maka fasika hanamboarana trano, ka mety hiakatra manaraka izay koa ny vidiny.
lundi, 16 janvier 2017 16:33
Vangaindrano : Feno olona manodidina ny biraon’ny Zandary, miatrana ny mpitandro ny filaminana
Ny marainan’ny alarobia 11 janoary 2017 dia nahitana fatina tovovavy iray, 19 taona, mpianatra avy amina sekoly tsy miankina iray eto Vangaindrano. Avy any amin’ny Kaominina Lopary, izay 16km tsy hiditra ny tanànan’i Vangaindrano no fiavian’ity tovovavy ity. Nandeha ny famotorana ka telo lahy no voarohirohy tao amin’ny borigadin’ny Zandary. Tsy mahalefitra ny Fokonolona avy any Lopary, miaraka amin’ireo Kaominina roa mpiray Dina aminy, ka tapa-kevitra io maraina io fa haka ireto voarohirohy ireto hatao fitsaram-bahoaka. Efa tonga eto Vangaindrano tampon-tanàna, ary eny manodidina ny biraon’ny Zandary ireto Fokonolona ireto miandry ny famoahana. Mandeha ny fifampiresahana amin’izao fotoana izao, hisorohana ny savorovoro.
Polyteknika Vontovorona : Nivoaka ny tetiandro handoavana ny vatsim-pianarana
Isan’ny foto-pitakian’ny mpianatry ny Polyteknika Vontovorona, ka nahatonga azy ireo nitonkona, nandoro kodiarana teo am-bavahady androany maraina ny handoavana vatsim-pianarana roa volana. Nivoaka ny misandratr’andro teo ihany ny tetiandro handoavana izany amin’ity herinandro ity. Nihemotra ny grevy, efa tonga teny an-toerana ihany koa ny miaramilan’ny Emmo-Reg. Mbola tsy voavaha kosa ny resaka delestazy.
lundi, 16 janvier 2017 16:08
Ambatondrazaka : Mifanaretsaka ny mpivarotra masikita mandehandeha
Manomboka mahazo vahana ao an-tsenan’Ambatondrazaka ny fivarotana masikita na tono hena mandehandeha raha ny varotra koban-dravina no nalaza taloha. Avy any amin’iny Faritra Vakinankaratra iny ireo mpivarotra azy ity no tonga mila ravinahitra eto Ambatondrazaka.
lundi, 16 janvier 2017 14:43
Maritampona Atsangasanga : Mandoro trano ireo dahalo rehefa tsy mahazo izay tadiaviny
Notafihin’ny andian-dahalo nirongo basy ny tokantrano iray tao Maritampona Kaominina Atsangasanga, Disitrika Ambatondrazaka ny alin’ny zoma hifoha ny sabotsy teo. Nisy ny fifampitifirana teo amin’ny tompontrano sy ireo jiolahy. Resy tosika ireto farany dia nanita-kevitra nandoro tamin’ny mololo ny trano misy ilay olona notafihan’izy ireo ; ireo trano manodidina nobahanan’ireo dahalo tamin’ny vato avokoa ny varavarana. Lehilahy iray may, voatifitra teo amin’ny nonony sy ny sandriny ny vadin'ny tompontrano. Tsaboina ao amin’ny hopitaliben’Ambatondrazaka izy ireo ankehitriny.
lundi, 16 janvier 2017 14:08
Vontovorona : Nigrevy ny mpianatry ny Polyteknika
Jiro tapaka lava sy fitakiana vatsim-pianarana no voalaza fa antony. Tonga teny an-toerana ny miaramilan’ny Emmo-Reg.
Page 157 sur 288